Home » vahaolana » EAS Products » EAS System
Carton habe: 160*40*15cm
fonosana: 1pcs / ctn,22.5KG,0.1CBM
EAS ny rafitra miasa avy amin'ny foto-kevitra tsotra na inona na inona ny mpanamboatra na ny karazana teknolojia manokana ampiasaina: ny fitaovana fandefasam-peo mandefa ny tsato-kazo famantarana ao amin'ny voafaritra peo ny mpandray. Izany miteraka faritra fanaraha-maso, Matetika no any amin'ny Checkout Ilany aiza na fivoahana ao an-raharaha ny Varotra antsinjarany. Rehefa niditra ny faritra, ny tenifototra na marika amin'ny toetra manokana miteraka korontana, izay hita ny mpandray. Ny tena fomba izay ny tenifototra na marika disrupts ny faneva dia anisan'ny mampiavaka EAS samy hafa rafitra. Ohatra, Tags na ny etikety dia mety manova ny tsato-kazo famantarana amin'ny alalan'ny fampiasana tsotra semi-mpitarika Junction (ny fototra fanorenana andian-tsoratra iray Integrated faritra), miala ny faritra ahitana ny inductor sy ny capacitor, andriamby malefaka ravin na tariby, na ny tadin resonators.
Ny famolavolana ny sahiran-tsaina amin famantarana namorona ny tenifototra, ary hita ny mpandray no mampiavaka sy tsy mety ho namorona ny toe-javatra voajanahary. Ny tenifototra no singa fototra, fa tsy maintsy hamorona manam-paharoa famantarana mba tsy diso fanairana. Ny korontana ao amin'ny elektronika tontolo iainana nateraky ny tenifototra na marika miteraka fanairana toe izay mampiseho ny olona iray matetika dia shoplifting na manala ny voaaro zavatra avy ao amin'ny faritra.
Ny toetry ny teknolojia tononiny ny fomba malalaka ny fivoahana / fidirana Ilany aiza no mety ho. Ny rafitra misy ny rakotra fanaovam-panavotana avy amin'ny tery Ilany aiza no niakatra ho any amin'ny malalaka fivarotana fanokafana toeram-pivarotana. Toy izany koa, ny karazana teknolojia vokany eo ny mora ny fiarovana (fibahanana na ny tsato-kazo famantarana detuning), ny fahitana sy ny haben'ny ny tenifototra, ny taham-diso fanairana, ny isan-jato ny tahan'ny mamantatra (haka taha), sy ny vidiny.
Ny fizika iray manokana sy ny vokatry ny tenifototra EAS EAS mamaritra ny teknolojia isan-karazany, izay matetika no ampiasaina mba hamoronana ny fanarahamaso faritra. EAS miainga amin'ny rafitra ambany indrindra peo amin'ny alalan'ny onjam-peo isan-karazany hatetika. Toy izany koa, peo samihafa ireo anjara lehibe eo amin'ny fanorenana ny endri-javatra izay misy fiantraikany hetsika.